Army တွေဆိုတာ BTS Band အတွက် အရေးကြီးပြီး တစ်ခုတည်းသောထူးခြားချက်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ထပ်တလဲလဲပြောကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။ Army တွေကလည်း သူတို့ရဲ့ biases တွေကနေ သံယောဇဉ်တွေ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအားလုံးကိုလည်း professtional အလုပ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားတဲ့အတွက် ၎င်းတို့ကို တကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သိုပေမယ့် Army တွေဟာလည်း သူတို့ Idol တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝတွေကို သိချင်ကြပါတယ်။ celebrity crush တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားရခြင်းရဲ့ အလုံခြုံဆုံးနှင့် အကြားချင်ဆုံးအဖြေတစ်ခုက နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို crush တွေရှိနေမလဲဆိုတာပါပဲ။ BTS အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်မှာ ဘယ်လို relationships မျိုးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားကြမလဲ?
တကယ်တော့ K – Pop Idol တစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ ထူးခြားပြီး ရှင်သန်ဖို့ တော်တော်မလွယ်ကူတဲ့ဘဝမျိုးပါ။ အနောက်တိုင်းအနုပညာရှင်အများစုနဲ့ မတူဘဲ သူတို့ရဲ့ fanbase ဆီမှာပဲ သူတို့ရဲ့ personal ကိစ္စတွေ အထူးသဖြင့်တော့ သူတို့ရဲ့ အချစ်ရေးကိစ္စတွေအထိ မြုပ်နှံထားကြရပါတယ်။ fan တွေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဘဝနှင့် လက်တွေ့ဘဝကို မကွဲပြားတဲ့အခါ ချစ်သူရည်းစားထားမိတဲ့ K – Pop Idol တွေခမျာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသစ္စာဖောက်သူတွေဖြစ်ကြရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် K – Pop Idol အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းကာအတွင်းမှာ လုံးဝ ချစ်သူရည်းစားထားပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ Army တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Idol တွေကို နှမျောတွန့်တိုခြင်းနှင့် တစ်ယူသန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကြောင့် BTS အဖွဲ့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေကို သိရဖို့က အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ V ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
Kim Yoo – Jung နှင့် V ဟာ မြေအောက်ရထားလမ်းထဲ အချစ်ဇာတ်လမ်းများလား?
တိုက်ဆိုင်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့လာရတဲ့အခါ ပရိတ်သတ်တွေဟာ ဒီအချက်ကို တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ ၂၀၂၀ အစောပိုင်းမှာ V ကိုယ်တိုင်က သူ့ရဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ မြေအောက်ရထားစီးနေတယ်ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံပြင်တွေကို မျှဝေခဲ့ဖူးပါတယ်။ Fan တွေကတော့ ပုံမှန်ခရီးသွားဖို့ စီးတယ်လို့ပဲ ထင်မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ Kim Yoo- Jung ဟာလည်း V နဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာလိုပဲ မြေအောက်ရထားက ဓာတ်ပုံတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခဲ့တာကြောင့် ကောလဟာလတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။ လျှို့ဝှက်မြေအောက်ရထားလမ်းအချစ်ဇာတ်လမ်းဟာ ချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေကတော့ ဒီထင်မြင်ချက်တွေကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
V ရဲ့ လျှို့ဝှက်အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခုက Instagram posts တွေမှာ Hiလို့ ရည်ညွန်းပြီး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို mention နေခဲ့တာကြောင့်ပါ။ Caption အများစုမှာ ‘Hi’ ဆိုတဲ့ စာလုံးပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ သိပ်မသိသာပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းအချက်အလက်တွေစုစည်းလိုက်တဲ့အခါ fan တွေကိ ပိုသတိထားမိလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကို V မှာ လျှို့ဝှက်ချစ်သူရှိနေတယ်ဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားသတိပြုမိစေတာက V ဟာ လက်စွပ်တစ်ကွင်းကို တစ်ချိန်လုံးဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။
BTS ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ကတော့ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာ ရှင်းလင်းဖို့ ကြိုးစားပါသေးတယ်။ တစ်ချို့ Army တွေကလည်း BTS ရဲ့ သူတို့အပေါ်ထားရှိတဲ့ သံယောဇဉ်ကြောင့် ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဖြေသိမ့်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာနဲ့ V ရဲ့ real RS မဖြစ်ဖို့ ဆုတောင်းရင်း V ရဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုအတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ပေးနေကြပါတယ်။
K-Drama တွေဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လွှမ်းမိုးနေတာကြောင့် Fight for my way, Hwarang , What's Wrong with Screctry ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့ လူသိများလာတဲ့ မင်းသားချော Park...